Mogadishu Journal » Ra’iisal wasaare Saacid oo gaaray magaalada Jidah ee dalka Sacuud Arabiya
Mjournal : — Ra’iisal wasaaraha xukuumada Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Jidah ee dalka Sacuud Arabiya oo la filayo in uu kulamo kula qaato mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Boqortooyada Sacuudiga.
Booqashada wafdiga uu hogaaminayo ra’iisal wasaare Saacid ayaa la sheegay in ay tahay mid ku saleysan martiqaad rasmi ah oo uu ka hellay madaxda dalkaas, oo ay ka wada hadlli doonaan xaalada dalka Soomaaliya.
Gaar ahaan waxaa la filayaa in wafdiga iyo madaxda dalka Sacuudiga ka wada hadllaan sidii ay dowladda Sacuudiga maalgashi ugu sameyn laheyd Soomaaliya oo hadda ka soo kabaneysa burburkii ka soo gaaray dagaalladii sokeeye iyo labo iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay.
Xukuumada Soomaaliya ayaa dadaal dheeraad ah ugu jirtaa sidii ay bulshada caalamka uga dhaadhicin lahayd in Soomaaliya laga taageero dhinacyada nabadda, xasilloonida iyo horumarka, waxaana xusid mudan in maalintii shalay uun ay dalka dib ugu laabtay wasiirrka arrimaha dibada xukuumada Soomaaliya marwo Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo ka soo laabatay safar ay ku tagtay dalka China kaa oo qeyb ka ah qorshaha xukuumada Soomaaliya ay ku dooneyso in ay ku kasbato beesha caalam-ka.
Ra’iisal wasaaraha xukuumada Soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa in uu yahay mas’uul inta badan ka shaqeeya gudaha dalka oo safaradiisa dibada aad u kooban yihiin.